Flim2MM: The Hangover 1+2+3
ပိတ်ရက်ရှည်ရတဲ့ကာလမှာ Hangover ဖြစ်တက်သူများကို အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ ၁၊၂၊၃ ပြန်ပေါင်းထုတ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အညွှန်းကတော့ ၁ အတွက်ပဲ ပါပါတယ်။ ၂ နဲ့ ၃ ကလည်း အညွှန်းရေးစရာမလိုအောင် ကောင်းပါကြောင်း နှင့် R rated ဇာတ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း.....
Genre ကတော့ ဟာသ ပါပဲ... အခုတလော ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဟာသကားတွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်..
အဓိကသရုပ်ဆောင် လေးဦးပါပါတယ်.. အကုန်လုံး ဟသဇတ်ရုပ်ကို ပိုင်နိုင်တဲ့.. နာမည်ရသရုပ်ဆောင်တွေချည်းပါပဲ....
သူတို့ရဲ့ Character တွေကို စပ်စုကြည့်ရရင်ဖြင့်...
Doug Billings (Justin Bartha )
Doug ဟာ နောက်နှစ်ရက်အတွင်း မင်္ဂလာဆောင်မယ့် သတို့သားလောင်းပါ.. သူ့ရဲ့ bachelor party အတွက်.. Las Vegas အထိ သွားပြီး ကဲမယ့် သူတစ်ယောက်ပါ.. သူနဲ့အတူ သူ့ယောက်ဖ ၊ သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ပါ Las Vegas ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်.. ယောက်က္ခမကတောင် သူတော်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ငွေရောင် Mercedes ကားကြီးကိုပါ စိတ်ချလက်ချ ပေးလိုက်ပါသေးတယ်......
Phil Wenneck (Bradley Cooper)
သတို့သားလောင်း ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိန်းမနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ ကျောင်းဆရာပါ.. Las Vegas ကိုသွားမယ့် ခရီးစဉ် အတွက် တော်တော်အားခဲထားပါတယ် နောက်ပိုင်း Doug ပျောက်သွားတော့ သူကပဲ ဦးဆောင် ပြီး ရှာဖွေခဲ့ရသူပါ..
Stu Price (Ed Helms)
သူလဲ သတို့သားရဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်ပေါ့ ... အဲ.. သူက မယက (မယားကြောက်) မယူရသေးတဲ့ မိန်မကို ကြောက်နေသူပေါ့.. bachelor party ကို Vegas ကိုသွားမယ်လို့တောင် မပြောရဲဘဲ အခြားတစ်နေရာကိုသွားမယ်လို့ရွှေ့ပြော ရသူပါ...
သတို့သမီးရဲ့ မောင် Doug ရဲ့ ယောက်ဖ ပေါ့.. သူက ခပ်ပေါပေါ ခပ်ကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက်ပါ... သူ့နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ လူတွေကို ပျော်စေချင်လွန်းလို့.... အရက်ထဲ စိတ်ကြွဆေးတွေ ထည့်တိုက်ရင်း လက်ဆလွန်သွားလို့.. တလွဲတွေချည်းပဲ ဖြစ်ရပါတယ်... တစ်ကားလုံးမှာ သူကအခံရဆုံးပါ...
ဇာတ်လမ်းကတော့.... နောက်နှစ်ရက်မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် Dogu နဲ့ အတူ ယောက်ဖ Alan သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Phil နဲ့ Stu အားလုံးပေါင်း လေးယောက်တို့ဟာ... bachelor party အတွက် Vegas ကို ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်.. Doug ရဲ့ ယောက်ဖ Alan က အားလုံးကို ပျော်စေချင်လို့... အရက်တိုက်လိုက်ပါတယ်... Alan တိုက်တာတွေကို အားလုံးက တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက်သောက်ကြပါတယ်....
မနက် မိုးလည်းလင်းရော.. သူတို့တည်းတဲ့ Hotel အခန်းထဲ မှာ ပစ္စည်းတွေ လူတွေ အားလုံးဖယိုဖယဲ ဖြစ်နေပါတယ်.. တစ်ခန်းလုံးရှုပ်ပွပြီး ဘယ်ကမှန်းမသိ ရောက်လာတဲ့ ကြက်တွေ... ရေချိုးခန်းထဲမှာလဲ ကျားတစ်ကောင် ဘီဒိုထဲမှာလည်း တစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် Phil ရဲ့ လက်မှာလည်း ဆေးရုံက ပတ်ပေးလိုက်တဲ့ လတ်ပတ်နဲ့ သွားဆရာဝန် Stu ကတော့ သွားတစ်ချောင်းမရှိတော့ပါဘူး... သူတို့ရဲ့ကားက အလာတုန်းက Mercedes အခုတော့ ရဲကား ဖြစ်နေပါပြီ... အဲ့ဒါတွေထက် ခေါင်းပူစရာတစ်ခုက နောက်နှစ်ရက်မှာ မင်္ဂလာဆောင့်မယ့် သတို့သားလောင်း Doug ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားခြင်းပါပဲ
ဘယ်သူမှ ဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူး .. အားလုံးနောက်ဆုံး မှတ်မိတာကတော့ လေးယောက်လုံး အရက်တူတူ သောက်ခဲ့တာကိုပဲ မှတ်မိပါတော့တယ်... သူတို့ ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို လိုက်ဖော်ရင်း အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သတို့သားလောင်း ကိုပြန်တွေအောင် လိုက်ရှာကြပုံကို.. ကောင်းမွန်တဲ့ ဟာသခန်းတွေချည်းနဲ့ပဲ သရုပ်ဖော် ထားတဲ့ ဟာသကားလေးပါ..
ထူးထူးခြားခြား အမေရိကန် လက်ဝှေ့အကျော်အမော်.. မိုက်တိုင်ဆန် ကလည်း ဒီကားလေးထဲ မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်...
ဟာသကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်ရင် ဒီကားကိုကြည့်ပါလို့ ကျွန်တော်က ညွှန်းပါတယ်... IMDB မှာတောင် 7.9/10 အထိ rating မြင့်နေတဲ့ ကားလေးပါ..
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Grammephyo (http://grammeworld.blogspot.com)
[FORMAT]:………………………….:) BluRay / 1280p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 772 MB/ 729 MB/ 815 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 40 mins
[Translated By] ………........…..:) မိုးစက် ၊ gurelia
Posted by Y Junction at 6:08:00 AM